Mareykanka oo sheegay in Soomaaliya ay weli hoy gabaad ah u tahay argagixisada Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in Soomaaliya ay weli hoy gabaad ah u tahay argagixisada Al-Shabaab
Mareykanka oo sheegay in Soomaaliya ay weli hoy gabaad ah u tahay argagixisada Al-Shabaab
September 22, 2018 Abdi Omar Bile Somalia 0
Kolonyo maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa weli hoy gabaad ah u ah argagixisada Al-Shabaab oo ah garabka Al-Qaacida ee Geeska Afrika, iyada oo maamusha qeyb balaaran oo dhul ah oo kuyaala Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya, sida Waaxda Arrimaha Dibada Mareykanku ay ku sheegtay warbixin ku saabsan argagixisanimada oo la daabacay asbuucaan.
“Dhammaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, ciidamada Soomaaliya ee SNA iyo Mareykanka iyo saaxiibadiisa, Al-Shabaab waxay la kulantay cadaadis milatari oo muhiim ah intii lagu guda jiray sanadkii 2017-kii, balse ururku weli waxa uu maamulaa dhul balaaran oo katirsan dalka,” sida lagu yiri warbixinta. “Al-Shabaab waxay heysataa awood ku filan oo ay ku qaado waxyaabaha qarxa ee baaburta lagu rakibo, qaraxyada ismiidaaminta ah, madaafiicda, iyo hubka fudud,”
“Soomaaliya weli waxay hoy gabaad ah u tahay argagixisada,” ayaa lagu yiri warbixinta. “Argagixisadu waxay isticmaalaan xoriyadooda dhaqdhaqaaqa si ay u helaan kheyraadka, qorista dagaalyahannada, iyo qorsheynta iyo ku shaqeynta hawlaha Soomaaliya iyo waddamada dariska ah, sida Kenya.” Ayaa lagu sii yiri.
Mareykanka ayaa sanadkii 2017-kii kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya isaga oo qaaday 34 duqeymood. Sidoo kale sanadkan 2018-ka 20 duqeymood ayuu ka geystay Soomaaliya, sida ay muujinayaan warbixinadu.
August 8, 2020 Ugu yaraan sideed askari oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
August 29, 2019 Kantaroolada Garoowe oo la rari doono kadib markii ay magaaladu ku fiday
Hoggaamiye dhaqameed lagu dilay degmada Hadaaftimo
US air strike kills 18 fighters of Al-Shabaab near Kismayo
Wasaarada arrimaha dibada Soomaaliya oo beenisay kulanka Madaxweynaha Soomaaliya iyo RW Israel
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaarada arrimaha dibada ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa beenisay in dhawaan kulan qarsoodi ah uu dhexmaray Raysulwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, sida uu daabacday Wargeyska The Times of [...]
World Aids Day commemorates in Garowe, HIV-positive police officer promoted
Garowe-(Puntland Mirror) Commemoration of World Aids Day on Sunday held in Garowe, Puntland capital. Speaking at the event, director of Puntland Aids Commission (PAC) Abdikadir Mohamed Ahmed said that 486 people with HIV were found [...]
Maleeshiyada ISIS ee ku sugan Puntland oo ku hanjabay weeraro argagixiso inta lagu guda jiro dabaalegyada sanadka cusub
Boosaaso-(Puntland Mirror) Xagjiriinta ISIS ee ku sugan gudaha Puntland ayaa taageerayaashooda ugu baaqay in ay qaadaan weeraro argagixiso inta lagu guda jiro munaasabadaha loogu dabaaldegayo sanadka cusub. Muuqaal lagu baahiyay online-ka ayaa ISIS u jeedisay [...]